Sagantaa Sagalee Irbuu; Qabsoo Qeerroo fi hegeree Oromo; Oduu Amma nu gahe!! Kichuu
HomeAfaan OromooNewsSagantaa Sagalee Irbuu; Qabsoo Qeerroo fi hegeree Oromo; Oduu Amma nu gahe!!
ODUU AMMA NU GAHE!!
Guyyaa har’aa Mar 22, 2019!
Ganama har’aa sa’aa 2:00 irraa eegalee lolli cimaan Wallagga Bahaa, Aanaa #Eebantuutti WBO fi RIP (Raayyaa ittisa OPDO/ODP) jidduutti adeemsiffameen waraanni bilisummaa Oromoo WBOn injifannoo goolabeera!
Haaluma kanaan lolicha WBOn ol’aantummaan kan xumure yeroo ta’u diinarra namoota 16 du’aan fi 8 madoo gochuun adabeera. Gama meeshaatiin
RIP Irraa Booji’uun galii waraana bilisummaa Oromoo ta’ee jira!!
Akkana ni sakattaan jadhanii ba’anii sakattamanii galuuniis ni jira!
Wbo barbaannaan haa jiraatuu!!
Wbon ko haala kanaan lola itti fufunaan meeshaan gurguddaan gara lixaatti guurame suniis keenya ta’uun isaa waan hin oolle!
Opdon osoo daangaa Oromiyaa weeraramaa jiru daangaa kabachiisuu dhiiftee waraana bilisummaa Oromoo irratti lola labsuun ishee diina ummata Oromoo ta’uun ishee raggaan kanaan ala hin hafne!
Kanaaf ummaatni keenyaa waraana keessan #Cina dhaabachuun
Bilisummaafi walabummaa keenya haa mirkaneeffannuun dhaamsa kooti!
Ummaata keenya Wbo malee gaachanni Oromoof Oromiyaa hin jiru
#WBO_Jabeessaa!! Qeerroon keenya biyyaa teenya haa eeggannuu?
#Injifannoo kana #Share godhuun waliif qoodaa!